केसीको रिहाइको माग गर्दै प्रदर्शन
काठमाडौं, २५ पुस । डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ । प्रदर्शनमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्व मन्त्री एवं कांग्रेस नेता गगन थापा, विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्र, कालाकार, चिकित्सक र सर्वसाधारण सहभागी छन् ।
प्रदर्शनकारीहरूले केसीको रिहाइको माग गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको आरोप लगाउँदै केसीले उनको राजीनामासहितका माग राखेर अनसन बसेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।